Ụbọchị My Pet » Angel nwamba
site Linda Anderson
emelitere ikpeazụ: Ka. 25 2020 | 4 min agụ
Ị na-nwamba n'anya n'ezie anyị, ma ọ bụ ndị anyị na-nanị isi iyi nke ha nri?
A Human Nwere Ike opener
Ezigbo nwere ike opener,
Ị gaghị agwa anyị hụrụ gị n'anya site n'ụzọ anyị na-eso unu gburugburu, na-awụlikwa elu jidesie gị obi mgbe ị na-atụghịdị anya ya, na purr ọbụna mgbe itís bụghị dinnertime? N'ezie, anyị hụrụ gị n'anya ọbụna karịa mgbe youíve nyere anyị anyị mmasị cat nri!
Mommas bụ a isi awọ tabby mara mma tiger striping. Mgbe anyị hụrụ ya, ọ dị ime na e metọrọ o ekpe ka ilekọta ya na nwere ya kittens n'okporo ámá. M dị afọ mbụ nke mahadum mgbe ndị mụrụ m kpọọrọ na Mommas na Persephone, na kpafuo catís otu fọdụrụ nwa. Anyị bụ ndị na-enwe ekele maka ha ọnụnọ. Thorndike, anyị cat nke afọ iri na ise, ndondo emi nwụrụ. Iru újú anyị n'elu adịkwa ya bụ oké, na anyị didnít chọrọ ịnọgide na-ebi a catless n'ụlọ. Anyị mkpa ihe m na-akpọ furry ịhụnanya,
karịsịa n'ihi na m bụ nanị nwa ndụ n'ụlọ mgbe m ndị nwanyị abụọ tọrọ kwagara si. Iji anyị ezi uba, Mommas na nwa ya nwaanyị gosiri na ndị ọkachamara na ubi nke cat akparamaagwa; ha maara otú e si na-elekọta peopleís mkpa mmetụta uche.
Mommas akwụ aha ya site n'ịkpa m nne na nna na m dị ka ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị ya ụmụ. Esisịt ini ke na-abịa n'ụlọ anyị na, Mommas malitere na-esonụ anyị gburugburu ịhụ ihe anyị ruo. Mgbe ọ bụla ọ bụla n'ime anyị tiri, Mommas nọdụ na ụkwụ anyị na ndidi na-echere ruo mgbe ọ pụrụ dọọ ya na ịhụnanya na nkasi obi.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ndụ n'otu obodo, nne na nna m kpaliri Pennsylvania na Mommas na Persephone, mgbe m na ụmụnne m ndị nọgide na Massachusetts. My nna pụtara na ihe niile m, na ihe ikpeazụ m ga-chọrọ bụ maka onwe ya na-anwụ anwụ naanị. Ma n'otu abalị,, kasị m njọ na-atụ egwu yiri ka na-ezi. My nwanyị rutere m doorstep na ụfọdụ nnọọ mwute ozi ọma: Nne anyị kpọrọ-agwa ha na sheíd na-abịa n'ụlọ ahụ nna m tọgbọ ndụ ụlọ ?ntị; ọ nwụọla mgbe na-ekiri telivishọn. Iji m enyemaka, ezie, ụmụnne m ndị nwanyị kwuru na nna m bụghị nanị oge ikpeazụ nke ndụ ya. A nnọọ ezigbo enyi na-ama ya: Mommas.
Mommas ama m fatherís mgbe nile enyi mgbe mama m gaa n'ihi na ọrụ ya. Ndị abalị na ọ hụrụ ya na-ebighị na-ehi ụra, Ọ na-hụrụ Mommas ọdụ site n'akụkụ ya. Ọbụna dị ka nne m tie n'elu ya, a cat agaghị ahapụ nna m. Mgbe ụgbọ ihe mberede wee, Mommas paced azụ na-apụta na gwuru ya claws n'ime kapeeti mgbe ọ bụla iji mee ka ya aga.
N'ikpeazụ, nne m coaxed ya n'ime ụlọ ihi nke mere na ozi nwere ike na-m fatherís ahụ pụọ.
Mgbe m fatherís ọnwụ, Mommas yiri ka nne m ehihie na abalị, nile ike. O mere ka ụlọ iyi na-erughị owu na-ama. Mụ na ya attentiveness, Mommas nyeere mfe na-egbu mgbu na-echeta. Mgbe ọ bụla m na nne ma ọ bụ m tiri, Mommas ndidi nọdụ na-esote anyị, weliri a ubọk aka anyị aka ma ọ bụ aka, na rachara anya mmiri anyị ihu ka anyị maara na ọ dị nso.
Ọ nọrọ nnọọ jụụ ka ọ ghara ichegbu anyị; o yiri maara na anyị mkpa iji na-eru uju. Mgbe anyị kwụsịrị na-eti, Mommas ga-amalite na loudest, ọtụtụ okpomọkụ purr. Mgbe ahụ sheíd ịrị n'elu otu n'ime anyị laps. M donít mara otú mama m na m ga-enwetatụbeghị site ndị ugboro na-enweghị Mommas.
Ihe fọrọ nke nta ka otu afọ mgbe m fatherís ọnwụ, Mommas ghọrọ ọrịa na-hyperthyroidism. Enweghị oké ọnụ cancer ọgwụgwọ na nkà mmụta ọgwụ, o nwere ike nwụrụ. Anyị egbula ya na-elekọta. Anyị couldnít ida ya ugbu a.
Ka emechara, ọ bụ onye òtù nke ezinụlọ anyị. Dị ka ọ malitere wụsịrị paụnd mgbe paụnd, anyị na-arụ ọrụ n'akwụsịghị akwụsị na Mommas iji jide n'aka na o rie mmezi nri na-ya arọ elu. N'ikpeazụ, ọ shrank ya nkịtị iri na abụọ-paụnd ọnụ ọgụgụ ha a obere asaa pound. Mgbe anyị kpebiri iji ya na-a pụọ ​​n'ihi na radieshon ọgwụgwọ, mkpara gwara anyị theyíd ahụtụbeghị a cat ka Mommas; ọ bụ ahụ ike ka mma karịa ndị ọzọ na-arịa ọrịa na a arọ. Na ụbọchị nke ya ọgwụgwọ, Mommas clung niile pụọ technicians, purring na ime ka ha na cuddle ya.
M na-ekele na-ekwu na Mommas laghachiri ezi ahụ ike. O di nwute na, anyị na-aba Persephone-arịa ọrịa shuga na nká na afọ a. Ọ bụ iju-ekiri Mommas jigide ùgwù dị ka ọtụtụ agabiga tupu ya. Ọ bụ ugbu a ka onyeisi ezinụlọ na-agụnye abụọ nnukwu nkịta anyị na-ada na site na n'okporo ámá. Anyị nwekwara Dutchess, a-eto eto ọhụrụ cat nke e metọrọ ma na-eleghara anya. Dutchess ese Mommasís ọ bụla enyo, amụta otú e si eme omume, ebe aga, na ihe na-eri.
Mommas ka noo otutu. Ọ bụ ọtụtụ thinner now, na ntutu isi ya ka furu efu kasị nke ya luster. Ọ bụ jụụ na ọdịnaya na-anọdụ ala na anyanwụ mgbe ejiji ya ajị anụ. Ọ bụ ezie na m maara na oge m na ya na-ejedebeghị, M na-agbalị ka ọ ghara iche banyere ya. Kama, M na-eche na ihe Mommas kụziiri m. M mụtara ihe site na nke a cat banyere onkondishional ịhụnanya, ùgwù, na ezinụlọ ọrụ karịa onye ọ bụla ọzọ. Nke ya bụ ịhụnanya na ọ dịghị okwu pụrụ ọma na-akọwa.
Karịa ihe niile ọzọ, Mommas bụ ihe mere m na-a ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ technologist. Ọ n'ike mmụọ nsọ m na a agụụ mmekọahụ nke na m kpọrọ ma jide hụrụ n'anya. Ana m amụta na-elekọta ndị na-adịghị ekwu okwu nke ha na-ata, onye na-eji nwayọọ na-anyị na-arịọ nanị maka ịhụnanya anyị na nloghachi.
Iguzosi ike n'ihe nke ezi enyi nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị kasị ntụsara ná ndụ.
È nwere ndị ọzọ, anụmanụ ma ọ bụ mmadụ, ndị na-ere na mkpa gị site n'akụkụ ha?